more ...Kubudirira nguva dzose (2022)
Gadzira foramu yemahara
Sarudza zita reakaundi (yako subdomain) uye isa yako e-mail kero. Ziva kuti yako yekutanga Administrator password inotumirwa kune yako email kero. Iwe hauzombogamuchira spam emaema kana kushambadzira kubva kwatiri. Kunyange zvakadaro, zvinogona kuitika kuti e-mail ine yako yepakutanga Administrator password inosvika mune yako spam folda.
Yedu yakazvimiririra foramu sisitimu ichaisa yako yemahara forum mumasekondi. Iwe unogona kuiwana ipapo uye tonga zvese. Zviponese wega yakawanda yemusoro uye mari kuburikidza neyemahara forum pane yako pachako forum kuiswa pane server yako! Iwe haufanirwe kunetseka nezve spam kurwiswa, software yekuvandudza, kuwanika, mutengo wemigwagwa, chirongwa kana chero chinhu chipi zvacho. Tarisa kunharaunda yako uye isu tichaita zvimwe! Kuchengetedza kwe data rako kwakakosha kwatiri. Ndicho chikonzero maseva edu ari kuAustria uye saka ari pasi pemirairo yakaoma yedziviriro yedata. Kutenda kune yedu nharaunda yakasarudzika, yako foramu inogona kushanyirwa nezviuru zvevomumhuri nekukurumidza mushure mekusaina. Yako foramu yakagadzirira kutanga pakarepo mushure mekupinda nekuresa nyore kuita zvakare.
Account Account [A-z uye 0-9]: .webboard.org
Yedu yakazvimiririra foramu sisitimu ichaisa yako yemahara forum mumasekondi. Iwe unogona kuiwana ipapo uye tonga zvese. Zviponese wega yakawanda yemusoro uye mari kuburikidza neyemahara forum pane yako pachako forum kuiswa pane server yako! Iwe haufanirwe kunetseka nezve spam kurwiswa, software yekuvandudza, kuwanika, mutengo wemigwagwa, chirongwa kana chero chinhu chipi zvacho. Tarisa kunharaunda yako uye isu tichaita zvimwe! Kuchengetedza kwe data rako kwakakosha kwatiri. Ndicho chikonzero maseva edu ari kuAustria uye saka ari pasi pemirairo yakaoma yedziviriro yedata. Kutenda kune yedu nharaunda yakasarudzika, yako foramu inogona kushanyirwa nezviuru zvevomumhuri nekukurumidza mushure mekusaina. Yako foramu yakagadzirira kutanga pakarepo mushure mekupinda nekuresa nyore kuita zvakare. Mazwi ekushandiswa kubva pane anoshanda anoshanda.